नुन धेरै खाँदा वर्षमा २ लाख ३० हजारको जान्छ ज्यान - Internet Khabar
नुन धेरै खाँदा वर्षमा २ लाख ३० हजारको जान्छ ज्यान
September 16, 2016 January 5, 2019 Internet Khabar
हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ शरिरमा नुनको मात्रा बढी हुँदा यसले शरिरमा विभिन्न किसिमका विकारहरु ल्याउने गर्छ । नुनको मात्रा अत्याधिक प्रयोग गर्ने कारणले विश्वमा वर्षेनी करिब २ लाख ३० हजार मानिसहरूको ज्यान जाने तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
अमेरिकन हर्ट एसोसियसनले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो पत्ता लागेको हो । विश्वमा वर्षेनी मृत्यु हुने मानिसहरूमध्ये १५ प्रतिशत मानिसको ज्यान अत्याधिक नुन सेवनका कारण हुने हृदयघात तथा अन्य मुटु रोगका कारण जाने गरेको एशोसियसनले जनाएको छ।
यस्तै हवार्ड विश्वविद्यालयले गरेको अर्को अध्ययनमा बढी गुलियो खाँदा ज्यान गुमाउने मानिसहरूको संख्या पनि त्यतिकै रहेको बताइएको छ । गुलियो बढी मात्रा खाएर वर्षेनी १ लाख ८० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा नुनमा पाइने सोडियमको मात्रालाई कम गर्न सके लाखौ मानिसको ज्यान जोगाउन कसिने बताइएको छ । यस्तै गुलियो पदार्थमा हुने शरिरलाई बेफाइदा पुर्याउने पदार्थको प्रयोग पनि कमी ल्याउनुपर्ने बताइएको छ।
September 16, 2016 January 5, 2019
यी खानेकुरा खानुहुन्छ भने आजैदेखी खान छोड्नुस्…
सावधान ! खाना खानेबित्तिकै गर्नु हुन्न यी ८ काम
January 16, 2018 July 8, 2018
आल्मुनियममा खाना प्याक गर्नुहुन्छ ? सावधान !